यी ३ तरिकाले लाग्ने छ अबको लकडाउन – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/यी ३ तरिकाले लाग्ने छ अबको लकडाउन
यी ३ तरिकाले लाग्ने छ अबको लकडाउन
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शमा जनस्वास्थ्यविज्ञले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मुख्य तीन सुझाव दिएका छन् । पहिलो सुझाव छ,कर्फ्युसहितको लकडाउन । दोस्रोमा लकडाउन र तेस्रो आंशिक लकडाउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोभिड–१९ सँग जुध्न सरकारले गरेको काम र प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए । सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो उनले जनतामा जति चेतना बढाउन सकिन्छ, कोभिडसँग लड्न त्यत्ति नै सजिलो हुने स्पष्ट पारे । तर, आफ्नै पार्टी (नेकपा)का नेताहरूमा अहिले गैरजिम्मेवारपन देखिएको उनको गुनासो थियो । उनले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीसीएमसी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेर उचित निर्णय लिइने बताएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छ ।
‘केही मानिस, केही माध्यम र केही संस्थामा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ । यथार्थमा भन्दा अन्त बुझ्न गइरहन पर्दैन मेरै पार्टीमा देखिन्छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेको छ । तर, मेरै पार्टीमा ४ सय ५० को केन्द्रीय कमिटी तुरुन्त चाहियो भन्छन्, कहाँ बस्ने हो ? के गर्ने हो ? त्यस्तो सोच केही पनि छैन । तर, बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा छ । स्थायी कमिटी अहिले नै बस्नुपर्‍यो, भरे बस्नुपर्‍यो त्यसबाहेक केही छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देश र जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिएको छ ।’
ओलीले कोभिडको संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने पनि बताए । ‘यता पल्टाएर पनि विरोध, उता पल्टाएर पनि विरोध । कहिले लकडाउन किन गरेको भनेर विरोध, कहिले लकडाउन किन खोलेको भनेर विरोध’, उनले भने, ‘यो महामारी सबैको चुनौती हो, कसैले पनि यसलाई विरोधको अवसर ठान्नु हुन्न । जसका लागि सामाजिक अनुशासन चाहिन्छ, विरोधको अवसरका रूपमा लिने हैन ।’ लकडाउन हटेको १३ दिनभित्रै २७ सय संक्रमित बढेकाले फेरि लकडाउन गर्न सुझाव दिएको एक सहभागीले बताए । समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेकाले तत्कालका लागि दुई साता कडा लकडाउन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले १५ दिन कडा खालको लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारी दिए पहिले भारतबाट आएका मात्रै संक्रमित हुन्थे भने अहिले समुदायमा पनि संक्रमित बढेका छन् । हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं र के गर्ने भन्नेबारे हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दियौं’, डा. पाण्डेले भने, ‘१५ दिन कडा खालको लकडाउन गर्ने र त्यसपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने गरी अगाडि बढ्न हामीमध्येका धेरैले सुझाव दिएका छौं ।’ अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले देशभरभन्दा पनि ठाउँविशेषका आधारमा लकडाउन गर्न सुझाव दिइएको बताए । ‘समग्रमा सबैतिर लकडाउन गर्दा आर्थिकलगायत गतिविधि ठप्प हुन सक्छन्’, डा. दीक्षितले भने, ‘कोरोना पनि कति समय रहन्छ भन्ने ठेगान छैन । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा थप मार खेप्नुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर ठाउँविशेषका आधारमा लकडाउन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव मैले दिएको छु ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आंशिक लकडाउन गर्न सकिने बताएका थिए । ‘कोरोना संक्रमित बढी भेटिएको हटस्पट छनोट गरी सिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कोराना संक्रमण बढी देखिएको भूभागमा आंशिक लकडाउन घोषणा गर्न सकिन्छ ।’ सहभागीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिए । सीमा–नाका व्यवस्थित गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । डा. पाण्डेले भने, ‘लकडाउन घोषणा गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाइ गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पुराना संक्रमितले सार्न सक्दैनन् । नयाँ संक्रमित पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’
चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) की डिन डा. दिव्या सिंह शाह, डा. महेश मास्केलगायतले भने लकडाउन घोषणाले समस्या समाधान नहुने बताएका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन नभएको कतिपय विज्ञको भनाइ थियो । ‘भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने र सेनिटाइजर लगाउने जस्ता सुरक्षात्मक मापदण्ड लागू गरेर मात्र हुँदैन’, आईसीयूविज्ञ डा. अर्जुन कार्कीको भनाइ थियो, ‘त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन । ’
त्यस्तै जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले पनि नागरिक उत्तरदायित्व बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले अस्पतालमा पूर्वाधार बढाउनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने कार्य गर्न सुझाव दिएका थिए ।
ओलीले सडकमा मान्छेहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रहरीमा संक्रमण बढी देखा परेको बताएका थिए । ‘प्रहरीलाई किन संक्रमण भएको छ भन्दा उनीहरू सडकमा गएका छन्, संक्रमित मान्छेहरूसँग उनीहरूले डिल गर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘अनेक कामहरूमा उनीहरू छन् । त्यस्ता कामहरूबाट उनीहरू संक्रमितहरू भइराखेका छन् । ड्युटीको क्रममा संक्रमित भइराखेका छन् । रेस्क्यु गर्न जाँदा संक्रमित भएर आएका छन ्